February 7, 2018 – Kalika Khabar
वृद्धभता जस्तै बालबालिका योजना ल्याउछौ: प्रचण्ड
February 7, 2018 adminLeaveaComment on वृद्धभता जस्तै बालबालिका योजना ल्याउछौ: प्रचण्ड
२४ माघ २०७४,काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल `प्रचण्ड´ ले राज्यले बालबालिकाको दायित्वलाई आत्मसात गर्नुपर्ने बताएका छन। राज्यले बालबालिका को स्वास्थ्य, शिक्षा आदि क्षेत्रमा अनुभूति दिने निर्णय गर्ने पक्षमा आफु रहेको बताएका छन् । बुधबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बालसञ्चार केन्द्र तथा बालमैत्री नेपालको सयुक्त प्रतिनिधि मण्डलसँगको कुराकानीका क्रममा अध्यक्ष दाहालले बालबालिबाको सर्वाङ्गिण विकासको अपरिहार्य […]
प्रहरीले राजेन्द्र खड्की माथी अनुसन्धान सुरु गर्यो।
February 7, 2018 adminLeaveaComment on प्रहरीले राजेन्द्र खड्की माथी अनुसन्धान सुरु गर्यो।
२४ माघ २०७४, काठमाडौं । नेपाली चलचित्रका द्वन्द्व निर्देशक तथा फिल्मी क्षेत्रका प्रख्यात ब्यक्तित्व राजेन्द्र खड्गीले गैरकानुनी रुपमा ११ जनालाइ दक्षिण कोरिया पठाएको खुलासा भएको भन्दै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ले राजेन्द्र खड्की माथी अनुसन्धान थालेको छ । एक कार्यक्रममा भाग लिन राजेन्द्र खड्की दक्षिण कोरिया गएका थिय। तेसै बेला ११ जनालाई उतै राखेको सूचना […]
February 7, 2018 February 7, 2018 adminLeaveaComment on उनी (कविता) : अस्मिता सुबेदि
२४ माघ २०७४, कालिकाखबर। जङ्गलको बिचमा झुपडीको बास, छैन कसैको आश उनलाई केवल त्रासै त्रास ।। पोहोर साल उनको घर बगायो रे बाढीले, त्यहि साल श्रीमानलाई हान्यो रे गाडीले ।। घरको बाटो हिॅड्नी बटुवा छैनन , आफै काम गर्छिन मागेर खानी उनी हैनन् ।। दिनप्रतिदिन चुनौती गर्दैगर्दै पार, खोज्छिन उनि हरेक दिन जीवन जीउनुको सार […]
२४ माघ २०७४, हेटौंडा । प्रदेश न.३ को अस्थायी राजधानी हेटौंडामा प्रादेशिक सरकारका लागि आवश्यक सबै संरचनाहरु तयार भएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका खाली रहेका सरकारी भवन प्रदेश सकारका लागि प्रयोग हरिने भएको छ । प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र सबै मन्त्रालयको कार्यालय पूर्वाधारले उपयुक्त मानिएका सरकारी भवनमा राखिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले जनाएको छ । […]
February 7, 2018 adminLeaveaComment on गजल- रमेस रसिक
गजल दिल दुख्नेहरूको पनि समस्याको हल छ। खोजेर हेर्नुस् चोकचोकमा भट्टी पसल छ। जिन्दगीलाई जिन्दगी जस्तै बनाउन पनि लाखौको प्रयास गर्नुपर्छ कहाँ सरल छ? खै कुन नशा मिसाएर नजरले हिर्कायौ? यता भेटेको दिनदेखि मेरो मन घायल छ। तिमीलाई पीडा हुँदा यता दुख्ने छ प्रिया खुसी बनाएर राख्छु भन्ने मेरो भाकल छ। संगतले बिगार्छ भन्छन् मलाइ […]
माल्दिभ्समा राजनितिक बन्दी रिहाको आदेश उल्टियो: सर्वोच्च
February 7, 2018 adminLeaveaComment on माल्दिभ्समा राजनितिक बन्दी रिहाको आदेश उल्टियो: सर्वोच्च
२४ माघ २०७४, काठमाडौं । माल्दिभ्सको सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक बन्दी रिहा गर्ने आदेश उल्टाएको छ । संकटकाल लगाएर प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई गिरफ्तार गरिएसँगै सर्वोच्चले आफ्नो निर्णय उल्टाएको हो । सर्वोच्चमा बाँकी रहेका न्यायाधीशहरुले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै ‘राष्ट्रपतिले देखाएको चिन्ताका बीच’ निर्णय उल्टाएको बताएका छन् । राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीनले आफूलाई पदच्युत गर्न न्यायाधीशहरुले षड्यन्त्र गरेको […]
सबै प्रदेशमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुँदै!!
February 7, 2018 adminLeaveaComment on सबै प्रदेशमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुँदै!!
२४ माघ २०७४, काठमाडाैं । राष्ट्रियसभा सदस्य चयनका लागि ७ वटा प्रदेश मध्य ६ वटा प्रदेशमा मतदान भइरहेको छ । प्रदेश २ मा भने निर्वाचन नै गर्नुपर्ने छैन। प्रदेश २ मा सबै उम्मेद्बारहरु निर्विरोध निर्वाचित भएका छ्न । प्रदेश १ को विराटनगर, ३ को हेटौंडा, ४ को पोखरा, ५ को बुटवल, ६ को विरेन्द्रनगर र […]